बाग्मतीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै युवा | नेपाली पब्लिक बाग्मतीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै युवा | नेपाली पब्लिक
बाग्मतीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै युवा
सफाइ अभियानमा जुट्दै युवा, ‘शिक्षामा रूपान्तरण : उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन’काे नारा
नेपाली पब्लिक २०७६, २५ श्रावण शनिबार १४:५४
काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवा बाग्मती नदी किनारमा जम्मा भई सफाइ अभियानमा जुटेका छन्।
बाग्मती सफाइ महाअभियानको ३२६औँ हप्ताको कार्यक्रममा युवाले अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाए। राष्ट्रिय युवा परिषद्को आह्वानमा जम्मा भएका युवाले नदी सफाइ गर्नुका साथै जनचेतनामूलक अभियानलाई देशव्यापी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बाग्मती र रुद्रमतीको दोभान बुद्धनगरमा भएको सफाइमा ४ सयभन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता थियो।
परिषद्ले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षामा रूपान्तरण : उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन’ भन्ने नारासाथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहेको छ। तीनैवटा सुरक्षा निकायसहित दुई दर्जन बढी संस्थाको सहभागितामा भएको सफाइबाट चार मेट्रिक टन फोहाेर व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेललगायत अभियानकर्मीको सक्रियता थियो।
गुह्येश्वरीमाथिको बाग्मती सफाइको २८८औँ हप्तामा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ जम्बुडाँडा क्षेत्रमा सफाइ गरी एक गाडी फोहाेर व्यवस्थापन गरियो। बाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चको आयोजनामा भएको सफाइमा २ सय ५० भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता थियो।
घरबाट निस्कने कुहिने फोहाेरलाई आफैँ व्यवस्थापन नगर्नेलाई यस क्षेत्रको सफाइमा नआउन आग्रह गरिएको अभियानकर्मी ईश्वर पुडासैनीले जानकारी दिए। रुद्रमती सफाइको २८०औँ हप्तामा रुद्रपनेकु पुलबाट रातोपुलसम्म सफाइ गरी दुई गाडी फोहाेर व्यवस्थापन गरियो। सफाइमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीसहित २ सयभन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियता रहेको रुद्रमती सरोकार समाजका उपाध्यक्ष रोहित गिरीले बताए।
विष्णुमती सफाइको २५३औँ हप्तामा टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ गणेशस्थानबाट बानियाँटार पुलसम्म सफाइ गरियो। सफाइका क्रममा वडा कार्यालयको ७७ प्रतिशत लगानी र उपभोक्ताको २३ प्रतिशत लगानीमा डस्टविन र कम्पोस्टविन दिने घोषणा गरिएको सफाइ संयोजक शोभाकान्त पाण्डेले जानकारी दिए।
डस्टविन र कम्पोस्टविन दिएपछि पनि फोहाेर व्यवस्थापन नगर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरमा ल्याउने घोषणा वडा अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले गरे। सफाइमा वडा अध्यक्ष अधिकारीका साथै वडा सदस्य तारा कँडेललगायत २ सय २५ भन्दा बढी अभियानकर्मीको सहभागिता थियो।
मनोहरा सफाइको १२५औँ हप्तामा जडीबुटीचोकमा सफाइ गरी तीन गाडी फोहाेर व्यवस्थापन गरियो।सफाइमा नेपाल प्रहरीलगायत स्थानीयवासीको उल्लेख्य सक्रियता रहेको सफाइ संयोजक चन्द्र दङ्गालले जानकारी दिए।
चक्रपथ वाफल खण्ड सफाइको १०४औँ हप्तामा सीतापाइला चोकबाट वाफलसम्म सफाइ गरियो। २ सय जनाभन्दा बढी अभियानकर्मीको सक्रियतामा भएको सफाइबाट दुई ट्रक फोहाेर व्यवस्थापन गरिएको संयोजक ताराबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। यसैगरी चक्रपथको उत्तरी खण्ड, आलोकनगर, तिलगङ्गा, सुन्दरीघाटलगायत क्षेत्रमा पनि सफाइ अभियान जारी छ। विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको बाग्मती सफाइ महाअभियानले देशभर सफाइ जागरण ल्याएको छ। (रासस)